Umyili we-Isis unabela kwihlabathi liphela. Kwilizwe lethu yingubo ebonakalayo yomphefumlo kwaye imelwe zizinto ezimbini zesini esahlukileyo.
Vol. 6 I-OCTOBER, 1907. 1
I-ISIS kuthiwa yayingu-dade-ntombi-ungumfazi-ongumama. Wabizwa ngokuba ukumkanikazi wezulu, ophethe ubomi, umama wabo bonke ubomi kunye nomniki kunye nombuyisi weefom.
I-Isis yayisaziwa phantsi kwamanye amagama amaninzi kwaye inqulwa ngokubanzi kubuntu bamaxesha okuqala kulo lonke ilizwe lase-Egypt. Zonke izigaba kunye neeklasi zazingafaniyo nabanquli bakaIsis. Ikhoboka eliphantsi kobushushu, obunabomi beliqithiweyo buchatshwe kukusebenza kwakhe imihla ngemihla ematyeni ephiramidi; ubuhle obufakelweyo, obabubomi bumnandi obumnandi buphakathi komculo othambileyo kunye neentyatyambo ezimnandi, zinxitywe iziqholo kwaye zihonjiswe ngomoya ocociweyo, onemvakalelo yonke ekhuthazwayo bubugcisa kunye nobuchule bobuhlanga kwaye wazaliswa yimveliso yeminyaka yobudala ukucinga kunye nomzamo; Isazi seenkwenkwezi esivela endaweni yakhe kwipiramidi sabukela ukuhamba kwabahambi basezulwini, silinganisa isantya kunye ne-arc yohambo, sibalwa ngelo xesha lokubonakala kwabo besendaweni yonke kwimbali yabo, kwaye kanjalo besazi ngemvelaphi yabo, indalo kunye nesiphelo: bonke ngokufanayo babengabanquli bakaIsis, kodwa elowo ngokwegumbi lakhe kwaye enobubele kwaye evela kwindiza yakhe yolwazi.
Ikhoboka elalinyanzelwa ukuba lisebenze ngenkani lalingakwazi ukumbona “umama onenceba,” ngoko ke laqubuda kwinto eyayibona neyathi yayingcwele kuye: umfanekiso oqingqiweyo welitye awayeza kuthululela kulo. krakra umphefumlo wakhe kunye nokuthandazela ukukhululwa kumakhonkco omphathi. Ukususwa ekusebenzeni kunye nobunzima, kodwa ukwazi u-Isis akukho bhetele kunekhoboka leentlungu, ubuhle, ikhoboka lolonwabo, ukubhenela kwi-Isis engabonakaliyo ngokusebenzisa iisimboli zeentyatyambo kunye neetempileni kwaye wacela ukuba u-Isis aqhubeke nobuninzi obuvuyiswayo ngumxhasi. Kwintshukumo yemizimba yasezulwini, isazinzulu-somlingo sasiza kubona imithetho kunye nokuhamba kwelanga. Kuzo wayefunda umthetho kunye nembali yendalo, egcinwe kunye neyentshabalalo: wayeya kuthi azidibanise neengcinga kunye nefuthe lesintu kwaye afunde isiphelo soxinzelelo njengoko kumiselwe zizenzo zabantu. Ukufumanisa imvisiswano ngalo lonke ixesha lokuthathwa kwamanyathelo omthetho, umthetho ngophazamiseko kunye nenyani yokubonakala, isazi ngeenkwenkwezi-yazisa le mithetho ka-Isis kubalawuli belizwe, abathi nayo bayithobele loo mithetho ngokobunjani bayo kunye nobukrelekrele. Ukubona isenzo esingenakuguqulwa somthetho kunye nokuhambelana ngazo zonke iindlela ezikhoyo, isazi ngeenkwenkwezi siwhloniphile umthetho, sasebenza ngokuhambelana nawo kwaye sanqula inyani enye kwiifom eziveliswe yi-Isis engabonakaliyo.
Ikhoboka leentlungu kunye nolonwabo lalisazi i-Isis kuphela ngohlobo nangeemvakalelo; Izilumko zazisazi uIsis njengomlimi oqhubayo kunye nomxhasi wazo zonke izinto.
Ubuntu butshintshe kancinci ukusukela ngomhla we-Khem yakudala. Iminqweno yayo, amabhongo, kunye neminqweno yahlukile kuphela kwinqanaba, hayi ngohlobo. Imigaqo-siseko yolwazi iyafana neyeyor. Iindlela kunye neefom zodwa zitshintshile. Imiphefumlo ethathe inxaxheba kubomi base-Egypt inokuphinda ingene ebaleni kule mihla. UIsis akazange afele eJiphethe nanjengoko engekazalwa apho. Unqulo lukhona namhlanje njengoko lwalusenza njalo.
Umvukuzi ogqobhozela emathunjini omhlaba athandaza kumfanekiso kaMariya ukuba amkhulule kwimixokelelwane yokusebenza nzima. I-phantom chaser yolonwabo ithandazela ukuqhubeka konwabo. Isilumko siwubona umthetho kunye nocwangco ngokubonakala kokungabikho kokusesikweni kunye nokudideka kwaye sisebenza ngokuhambelana nenyaniso ekuphela kwayo sifunda ukuyibona ngokubonakala konke. Isis isenyanisweni nanamhlanje njengakwimihla yeKhem. Namhlanje uIsis unqulwa ngabavoti bakhe njengesithixo, esifanelekileyo, okanye esona, njengoko wayenjalo ngelo xesha. Igama kunye neendlela zeenkolo zitshintshile kodwa inkolo kunye nenkolo ziyefana. Abantu babona kwaye banqule ii-Isis ngokobume bazo, abalinganiswa kunye namanqanaba ophuhliso. Njengoko ukunqulwa kukaIsis kwakukobukrelekrele babantu base-Egypt, kunjalo ngoku ngokobukrelekrele babantu beli xesha lethu. Kodwa nangaphambi kokunyuka kwempucuko yethu ukuya kwinqanaba elihambelana nobuqaqawuli kunye nobulumko baseJiphutha, abantu bethu baya besiba banqabileyo ekunquleni kwabo i-Isis njengokuba kwakunjalo ngamaYiputa ekusukeni kweYiputa. Ukongeza kubuqaqawuli beemvakalelo, imali-amandla, ezopolitiko, nobubingeleli eziyekisiwe ebantwini ulwazi lwe-Isis mihla le njengakwimihla yeJiphutha.
Lowo uyokwazi ukuba u-Isis kufuneka adlule ngaphaya kwesigqubuthelo kwindawo ye-Isis ye-infaciate; kodwa kubo bonke abantu abafayo Isis yaziwa kuphela njengoko injalo, yakrolwa kakhulu kwaye yagqunywe kakhulu.
Kodwa ngubani uIsis kwaye uyintoni umkhusane wakhe? Intsomi yeVenkile yeIsis isenokuchaza. Intsomi iqhutywa ngoku:
U-Isis, umama wethu ocacileyo, indalo, indawo, usonga isigqubuthelo esihle ukuba ngazo zonke izinto zinokubizwa zibekho kwaye zinikezwe ukuba zikho. U-Isis waqala kwihlabathi lakhe elingengomzimba ukuluka kwaye njengokuba wayesongela waphosa ukuthungwa kwesigqubuthelo sakhe, ethe-ethe ngaphezu kokukhanya kwelanga, malunga nobuThixo. Ukuqhubela phambili kwihlabathi elinzima, isigqubuthelo sasilukiwe ngokufanelekileyo de safikelela ezantsi kwaye safaka abantu emhlabeni kunye nelizwe lethu.
Emva koko zonke izinto ezijongiweyo zaza zabona ukusuka kwinxalenye yomkhusane ezazikuyo, ubuhle be-Isis ngokubonakala kwesigqubuthelo sakhe. Emva koko kwafunyanwa phakathi komkhusane uthando kunye nokungafi, isibini nesingasoze sahlukane, abo thixo baphakamileyo baqubuda kuye.
Abantu baye bazama ukubeka ezi zinto ziphakade zikwimo ukuze bazigcine kwaye bazive kwizikhuselo. Oku kubangele ukuba isigqubuthelo sahlulwe; kwelinye icala indoda, kwelinye icala. Endaweni yothando kunye nokungafi, isigqubuthelo esifumaneke kubantu abafileyo ubukho bokungazi nokufa.
Ukungazi kuphosele ilifu elimnyama nelicaphukisayo malunga nomkhusane ukuze abantu abangafihli nto bangaluphuli uthando ngokuzama kwabo ukuwufaka kwikhuselo. Ukufa, ke, kongeza uloyiko ebumnyameni, obungazisiweyo kukungazi, ukuze umntu angazibandakanyi ke, yeha, ekungqineni ukungafi, ekuqineni kwesidanga. Uthando kunye nokungafi, ke, zifihlakele ebantwini ukuba bangazi nokufa. Ukungazi kwenza mnyama umbono kwaye ukufa kongeza uloyiko, okuthintela ukufunyanwa kothando nokungafi. Kwaye umntu, esoyika ukuba angalahleka, unqonqoze aze ambambelele kufutshane nesigqubuthelo aze amemeze ebumnyameni ukuze aziqinisekise.
UIsis usamile ngaphakathi kwesigqubuthelo sakhe elinde de umbono wabantwana bakhe womelele ngokwaneleyo ukubhoboza kwaye babone ubuhle bakhe bungadyobhekanga. Uthando lusekhona ukuba lucoceke kwaye lucoceke ingqondo kwimigca yalo emnyama kunye namanxeba okuzingca kunye nokubawa, kunye nokubonisa ubudlelwane kunye nabo bonke ubomi. Ukungafiyo kuye ngumbala ongayekiyo ngaphakathi, kodwa ojonga ngokugqobhoza isigqubuthelo se-Isis, nangaphaya. Ke ukufumana uthando uziva evisisana nabo bonke, eba ngumkhuseli, umxhasi, umhlanguli okanye umkhuluwa ongumdala, kaIsis nabo bonke abantwana bakhe.
Isis, icocekile kwaye ayidyobhekanga, iyinto elungileyo yento yonke kwindawo engenamda, kwindawo engenamda. Isondo sisigqubuthelo se-Isis esinika ukubonakala kwemicimbi nangona kufukama umbono wabantu. Ukusuka kwiingcamango nakwizenzo zamadoda nezidalwa zehlabathi ezinxibileyo, ezithi i-Isis (indalo, into, indawo) iye yagcinwa ichukumisekile ngaphakathi kuye, umhlaba wethu waphinda waveliswa ngokomthetho wesizathu kunye nesiphumo. Ke uMama uIsis waqala iintshukumo zakhe kwimo yakhe engabonakaliyo kwaye ngokuthe ngcembe waziswa kuko konke oko obethathe inxaxheba kukuvela ngaphambili; ke ngoko umhlaba wethu wabakho ngaphandle kokungathi lilifu lakhutshwa esibhakabhakeni. Ekuqaleni izidalwa zomhlaba zazikhanya kwaye zinomoya; ngokuthe ngcembe baphucula kwimizimba yabo kunye neefom de ekugqibeleni babe njengoko sizifumana sikwenza namhlanje. Ngezo ntsuku zokuqala, nangona kunjalo, izithixo zazihamba emhlabeni nabantu, kwaye abantu banjengoothixo. Babengalazi isini njengathi njengangoku, kuba bengekangenwa kangako kwisigqubuthelo, kodwa ke bathi ngokuthe ngcembe bayazi ngalo njengoko amandla ayencipha aza aba sisiphithiphithi. Umbono wezidalwa ezingatshatanga ngokwesini wawunamafu kunathi; babenokuyibona injongo yomthetho kwaye basebenze ngokuhambelana nayo; kodwa njengoko ingqwalaselo yabo yayihlala ithathelwa phezulu kwizinto zehlabathi, kwaye nangokuhambelana nomthetho wendalo, ukubonwa kwabo kuvaliwe kwilizwe langaphakathi lomoya, kwaye ngakumbi kuvulekele ngokupheleleyo kwilizwe langaphandle lemicimbi; bakhule besabelana ngesondo baba ngabantu nje abaqhelekileyo namhlanje.
Kumaxesha amandulo imizimba yethu yayiveliswa ngokuthanda komthetho wendalo. Namhlanje imizimba yethu iveliswa ngumnqweno, kwaye ihlala ivela ngokuchaseneyo neminqweno yabo bayenzayo. Simile kwimizimba yethu kwinqanaba elingaphantsi le-arc ye -uterutionary nakwi-arc ephezulu yokujikeleza komjikelezo. Namhlanje sinokuqalisa ukukhwela, ukusuka kwelitye elityebileyo nelinzima kakhulu ukuya kwesona sigqubuthelo sikhulu nesona sinqabileyo somkhusane weIsis, kwaye sihlaba ikhuselo ngokupheleleyo, siphakame ngaphezulu, sijonge isis ngokwakhe endaweni yeefom zobunewunewu esizenzayo mthathe ukuba ngu, uyitolika ngekhuselo.
Ngokwemithetho elawulwa ngayo ilizwe lethu zonke izidalwa ezeza ehlabathini zenze oko ngokwesigqibo seIsis. Ubagalela isigqubuthelo abasinxiba ngexesha lokuphambukela kwabo apha. Isigqubuthelo se-Isis, ngesondo, sikhutshiwe kwaye silukiwe ziifesti, abo bantu bakudala babembiza ngokuba ziiNtombi zooMfuneko.
Isigqubuthelo seIsis sisasazeka kulo lonke ilizwe, kodwa kwilizwe lethu simelwe zizinto ezimbini zesini esahlukileyo. Ukwabelana ngesondo yinto engabonakaliyo eyalukiweyo kwiingubo ezifakwa zizidalwa ezingenanto ukuze zifumane ukungena emzimbeni kunye nokuthatha inxaxheba kwimicimbi yobomi. Kungenxa yesenzo seqela elichasayo, umoya kunye nemicimbi njenge-warp kunye noboya, ukuba isigqubuthelo ngokuthe ngcembe sibe yingubo ebonakalayo yomphefumlo; kodwa warp kunye noboya bunjengezixhobo kunye nezixhobo ezisoloko zitshintshwa kwaye zilungiselelwe isenzo sengqondo kwiminqweno. Ingcinga sisiphumo sokwenziwa kwengqondo kokunqwenela kwaye ngokucinga (♐︎) into yokomoya (♌︎) ibhekiswa kuhlobo (♍︎).
Imiphefumlo ithatha isigqubuthelo seIsis kuba ngaphandle kwawo ayinakuwugqibezela umjikelo wohambo lwabo ngokusebenzisa imihlaba yeefom; Kodwa ke, bethabathe isigqubuthelo, baba ziingxilimbela, bada bangenakuzibona njengezizathu zokuluka, nantoni na eyenye ngaphandle kweziyolo ezonwabisayo eziyinikezelayo.
Umphefumlo ngokwawo awunasondo; kodwa xa unxiba isigqubuthelo kubonakala ngathi unesini. Kwelinye icala lesigqubuthelo kuvela njengendoda, elinye icala njengowasetyhini, kunye nokudlala phakathi kunye nokujika kwesikhuselo kukhupha onke amandla adlala ngayo. Emva koko kudalwe kwaye kuphuhliswe imbonakalo yesigqubuthelo.
Imvakalelo yesondo ngumdlalo weemvakalelo zomntu ezifikelela kuwo onke amabakala obomi bomntu, ukusukela kwisehlo esisezantsi, imvakalelo yommangaliso, nangayo yonke imbongi ebambeleyo kwinkcubeko yabantu. Imvakalelo kunye nokuziphatha kwesikhuselo se-Isis kuboniswa ngokufanayo ngumlozi othenge abafazi bakhe okanye andise inani labo ngelungelo lokubanjwa; ngezenzo zembambano; ngenkolelo yokuba isini ngasinye senzelwe omnye umntu nguThixo; nangabo batolika injongo yokwabelana ngesondo ngandlela zonke. Zonke ziyafana iimvakalelo eziphucula ixabiso okanye umtsalane wesini esinye komnye. Kodwa uluvo olubonakala lukholisa kakhulu kwabanxibileyo isigqubuthelo luvo lwemfundiso yamawele omphefumlo, oboniswe phantsi kweendlela ezininzi ngokobunjani bokunqwenela komntu okholwayo. Ngokulula nje yile nto, ukuba indoda okanye umfazi kuphela kwesiqingatha sendoda. Ukugqiba kunye nokugqibelela ubuntu, esinye isiqingatha siyadingeka kwaye siya kufunyanwa komnye umntu wesini esahlukileyo. Ukuba ezi halves zenziwe zangqinelana kwaye zichane omnye komnye, kwaye kufuneka bazulazule kwimijikelezo yexesha de badibane kwaye bamanyane kwaye ngaloo ndlela benze ubuntu obugqibeleleyo. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba lo mbono umnandi usetyenziswa njengesizathu sokutyeshela ikhowudi yokuziphatha kunye nemisebenzi yendalo.
Inkolelo yomphefumlo wamawele yenye yezona zithintelo zinkulu kwinkqubela phambili yomphefumlo, kwaye ingxabano yomphefumlo wamawele iyazitshabalalisa xa ijongwa ngokuzolileyo kwimeko yesizathu ngumntu ongafumenanga ubumbano bomphefumlo wakhe okanye esinye isiqingatha kwaye ongenguye Ukubandezeleka kakhulu kukuxhwilwa yinyoka yesini.
Igama elithi isini linentsingiselo eliwaka kubaninzi abevayo. Kuwo ngamnye ubhengeza ngokokuma komzimba wakhe, imfundo kunye nengqondo yakhe. Kunye oko kuthetha konke ukuba inkanuko yomzimba kunye neminqweno yesilwanyana inokuthetha, komnye umbono ocacileyo wovelwano nothando njengoko luboniswa kukuzinikela kwendoda nomfazi, kunye noxanduva lobomi.
Umbono ngesondo uthwelwe kwicala lenkolo, apho umntu ozinikeleyo ecinga ngoThixo okhoyo, owazi konke kunye nonguThixo onamandla onke-okt, njengotata nomyili wezinto zonke-kunye nonina wenceba onenceba, ocelwe ngumntu ozinikeleyo kuye. ukumthethelela kuThixo, uYise okanye uNyana. Ke lo mbono ngesondo uqalwa yingqondo yomntu, kungekuphela nje njengokulawula kulo mhlaba uphela, kodwa njengokunwebeka kuwo wonke umhlaba kwaye ubenako ukubakho ezulwini, kwindawo engenakonakala. Kodwa nokuba umntu ukhulelwe ngokwesini ngendlela esezantsi okanye eyona nto iphakamileyo, esi sigqubuthelo se-Isis kufuneka sigqume amehlo ofayo Abantu baya kuhlala betolika oko kungaphaya komkhusane ukusuka kwicala lomkhuselo abheka kuwo.
Ayimangalisi into yokuba ingqondo yomntu ichukunyiswe yingcinga yesini. Kuthathe ixesha elide ukuyila into kwiifom zayo zangoku, kwaye nengqondo enento yokwenza notshintsho olwahlukeneyo lweendlela zento kufuneka ichukunyiswe ngabo.
Kwaye ke ngokwesondo, isigqubuthelo se-Isis, ngokuthe ngcembe sasilukwa ngapha nangapha nangazo zonke iindlela, kunye nomnqweno wesini ngendlela eyongwayo kwaye isekhona. Njengoko ingqondo yayingene ngokupheleleyo kwisini, umbono wayo waba umbala sisikhuselo. Lizibonile kunye nabanye ngokusebenzisa isigqubuthelo, kwaye yonke ingcinga yengqondo isekhona kwaye iya kufakwa umbala kwisigqubuthelo kude kube yilapho lowo uxhoma isigqubuthelo efunda ukucalula phakathi kwesinxibo kunye nesigqubuthelo.
Ke yonke loo nto ihamba emntwini, iyambeswa ngumkhusane weIsis.
Iiglasi zisetyenziselwa iinjongo ezininzi kwaye zihlala zidityaniswa nebhinqa. Indalo ithethwa njengabasetyhini, kwaye ikwimo kunye nentshukumo emelwe ngumfazi. Indalo ihlala igquma izigqubuthelo ngaye. Abafazi isigqubuthelo sisetyenziswa njengegumbi lobuhle, isigqubuthelo somtshato, isigqubuthelo sokuzila nokukhusela umoya omkhulu nothuli. Indalo njengoko umfazi ekhusela, efihla kwaye ezenza ukuba abonakale kusetyenziswa isigqubuthelo.
Imbali yokuluka kunye nokunxiba isigqubuthelo se-Isis ukuza kuthi ga ngoku, kunye nesiprofetho sekamva layo, icacisiwe kwaye yacetyiswa kubomi bomntu ukususela ekuzalweni ukuya kwingqondo evuthiweyo kunye nokwaluphala. Ekuzalwa komntwana ukhathalelwa ngumzali; ayicingi nokuhoya. Umzimba wayo othambileyo onobuncinci kancinci uthatha indawo ethe kratya. Inyama yayo yomelela, amathambo ayo omelele, kwaye ifunda ukusetyenziswa kweempawu zayo kunye namalungu ayo; akukafundanga ukusetyenziswa kunye nenjongo yesini sayo, isigqubuthelo eso esibhinqe kuso. Eli lizwe limela iintlobo zobomi bangaphambili; izidalwa zelo xesha zazingacingi isigqubuthelo se-Isis, nangona zazihlala ngaphakathi kwephiko lazo. Imizimba yabo yayiqaqanjiswe bubomi, basabela kwaye basebenza kunye nezinto kunye namandla njengoko ngokwemvelo kwaye ngovuyo njengoko abantwana behleka kwaye bedlala ekukhanyeni kwelanga. Ubuntwana abukacingi kwesi sigqubuthelo abasinxibileyo, kodwa esingabaziyo. Eli lixesha legolide labantwana njengoko lalinjalo eluntwini. Emva kwexesha umntwana uye esikolweni aze azilungiselele umsebenzi wakhe emhlabeni; umzimba wayo uyakhula ube bubutsha, ade avuleke amehlo akhe-kwaye iyabona kwaye iyayazi ikhuselo le-Isis. Emva koko umhlaba uyatshintsha ngenxa yawo. Imitha yelanga iphulukana ne-rosy hue yayo, izithunzi zibonakala ngathi ziwela malunga nezinto zonke, amafu ahlanganisana apho kungazange kubonwe khona ngaphambili, ubumnyama buwugubungele wonke umhlaba. Ulutsha lufumanise isini sabo kwaye lubonakala lungafanelekanga kwabo banxiba. Oku kungenxa yokuba into entsha yokufika kwengqondo sele ingene kulolo hlobo kwaye ibenemizimba yengqondo, enjengamasebe omthi wolwazi.
Intsomi yakudala ka-Adam no-Eva emyezweni we-Edeni kunye namava abo enyoka ayisekho, kwaye ubukrakra "bokuwa komntu" buye banamava ngakumbi. Kodwa imbono yesono ekuthiwa sisono iba yinto yolonwabo; ilifu lobumnyama elibonakala ngathi likho emhlabeni wonke kungekudala linika indlela kunye nemibala eyahlukeneyo enemibala yemibala. Ukubonakala kwesigqubuthelo kuyavela; iimpazamo zokuguqula grey zaba ziingoma zothando; iivesi ziyafundwa; Imibongo ihambelana nemfihlakalo yekhuselo. Isigqubuthelo siyamkelwa kwaye sinxibile-njengengubo emnyama yengubo yentsimbi, isigqubuthelo esibonisa oko sikuko, yingubo yonjongo.
Ubuntwana bohlanga luye lwakhula lwaba yindoda yokuqala yoxanduva kugqatso esele ikho. Nangona ihlala inyanzeliswa, ngokuthe ngcembe, kwaye ingacingi, nangona kunjalo, uxanduva lwesigqubuthelo sithathiwe. Isininzi sobuntu namhlanje sinjengamadoda-abantwana kunye nabafazi-abantwana. Bangena emhlabeni, bahlala, batshata, kwaye badlula ebomini ngaphandle kokwazi unobangela wokuza kwabo okanye wokuhamba kwabo, okanye injongo yokuhlala; Ubomi yigadi yolonwabo, iholo yezinto ezimbi, okanye isemina esencinci yabantu apho bafunda khona kancinane kwaye babe nexesha elimnandi ngaphandle kokucinga kakhulu ngekamva, konke oko ngokwendlela abathanda ngayo kunye nokusingqongileyo. Kodwa kukho amalungu osapho lomntu abona into enqabileyo ebomini. Baziva benoxanduva, bayayiqonda injongo, kwaye bazama ukuyibona ngokucacileyo kwaye basebenze ngokuhambelana nayo.
Indoda, emva kokuphila ngokugungqa kobudoda bayo, ithathe inkathalo noxanduva lobomi bosapho, ukuzibandakanya nomsebenzi wayo wobomi kwaye yathatha inxaxheba kwimicimbi yoluntu, inikezele ngenkonzo kurhulumente wayo xa ifuna njalo, Okokugqibela kukuba kukho injongo ethile engaqondakaliyo esebenza ngaphakathi nangaphakathi kwesikhuselo awasinxibileyo. Unokuzama ukufumana umbono wobukho kunye nemfihlelo azivayo. Ngokukhula kobudala, ingqondo iya komelela ngakumbi kwaye umbono ucace ngakumbi, ngokuxhomekeka ekubeni imililo isalal 'ukugquma kwisigqubuthelo kwaye azitshiswanga ngaphandle, kwaye ukubonelela ukuba imililo ayitshisi, ibangela umsi ukuba unyuke kwaye uwuse umbono kwaye ubenele. ingqondo.
Njengoko imililo yenkanuko ilawulwa kwaye isigqubuthelo sihlala singenasimo, amalaphu ayo ayahlanjwa kwaye ahlanjululwe ngesenzo sengqondo esibonisa umhlaba ofanelekileyo. Ingqondo ke ayikhawulelwanga ngumkhusane. Ingcinga yayo ikhululekile kwi-warp kunye noboya begqubuthelo kwaye ifunda ukucamngca ngezinto njengoko zinjalo kunokuba zinikwe kwifom kunye nokuthambekela kwesi sigqubuthelo. Ke ukwaluphala kunokuvuthwa bubulumko kunokudlula kubomi bokuphamba. Ke, njengoko ingqondo iba namandla kwaye ubuThixo bubonakala ngakumbi, umaleko wesigqubuthelo usenokuba unxibile kangangokuba unokubekwa ecaleni ngesazela. Xa ngolunye ukuzalwa isigqubuthelo siphinda sithathwe, umbono unokuba namandla ngokwaneleyo kubomi bokuqala, ukusebenzisa imikhosi ebekwe ngaphakathi kwesigqubuthelo ukulungiselela injongo yokumiselwa kwayo, kwaye ukufa kunokoyiswa.
Isigqubuthelo se-Isis, isini, sizisa ebantwini zonke iinkxwaleko zabo, ukubandezeleka kunye nokuphelelwa lithemba. Ngomkhuselo we-Isis kuza ukuzalwa, izifo nokufa. Isigqubuthelo seIsis sisigcina singazi, sizala umona, intiyo, irancor kunye noloyiko. Ngokunxiba kwesigqubuthelo kuza umnqweno ovuthayo, iiphantasies, uhanahaniso, inkohliso kunye neminqweno yesifiso.
Ngaba ke kufanele ukuba ngokwesondo kukhatywe, kukhatywe, okanye kucinezelwe ukuze kususwe isigqubuthelo esisikhuphe kwihlabathi lolwazi? Ukukhanyela, ukulahla okanye ukucinezela isini sakho kukwenza kude neendlela zokukhula. Inyaniso yokuba singabambathisi besigqubuthelo kufuneka isithintele ekuphikeni; ukulahla ukwabelana ngesondo kuya kuba ukwala imisebenzi kunye noxanduva lomntu, ukucinezela umntu othile ngesondo kukuzama ubuxoki kunye nokutshabalalisa iindlela zokufunda ubulumko kwizifundo ezithi uxanduva kunye noxanduva ngokwesondo lufundise, kunye nokuqonda iifom eziboniswa yi-Isis thina njengemifanekiso kwisigqubuthelo sayo kunye nezifundo zobomi.
Yamkelani ukunxiba isigqubuthelo, kodwa ke musani ukunxibisa ukuba yinto yobomi. Thatha uxanduva lweso sigqubuthelo, kodwa ungabanjiswa kwimiyalezo yayo ukuze ungalibali injongo kwaye unxilisiwe ngombongo wesikhuselo. Yenza imisebenzi yesigqubuthelo, kunye nomkhuselo njengesixhobo sokusebenza, kodwa ungabandakanywanga kwesixhobo kunye nesiphumo sokwenza. Isigqubuthelo asinakukhutshwa, kufuneka sibhangiswe. Ngokujonga ngokungagungqiyo kuyo iyaphela kwaye ivumela umanyano lwabazi nalowo waziwayo.
Isigqubuthelo siyakhusela kwaye sivalele kwingqondo yempembelelo yomntu kunye nemibutho enokuba yingozi kakhulu kukungazi kwakhe okwangoku ngamandla egumbi. Isigqubuthelo sesondo sithintela ingqondo ukuba ingaboni kwaye inxibelelane namandla angabonakaliyo kunye nezixhobo ezirhuqileyo ngaye, kwaye ezo, njengeentaka zobusuku, zitsala ukukhanya ukukhanya kwengqondo yakhe iphosa kwiindawo zabo. Isigqubuthelo sesondo ikwayindawo kunye nendawo yokudlala amandla endalo. Ukusetyenziswa kwayo kusasazwa kwamabakala emicimbi ngokusebenzisa izikumkani ezahlukeneyo. Ngomkhusane wesondo, umphefumlo unokungena kwindawo yendalo, ubukele ukusebenza kwayo, uqhelane neenkqubo zenguqu kunye nokuhambisa usuka ebukumkanini uye ebukumkanini.
Kukho amanqanaba asixhenxe ekukhuleni kobuntu ngokusebenzisa isigqubuthelo seIsis. Kudlulile ezine, sikwesihlanu, kwaye ezimbini zizokufika. La manqanaba asixhenxe ngala: ukungabi natyala, ubuchule, ukukhethwa, ukubethelelwa emnqamlezweni, ukucocwa kunye nokugqibelela. Ngamanqanaba asixhenxe, yonke imiphefumlo kufuneka idlule engafumananga kukhululwa kumjikelo wokuphindukuzalwa. La ngamanqanaba asixhenxe anento yokwenza nehlabathi elibonakalisiweyo, aphawula ukumiselwa kwemiphefumlo kwizinto ukuze afumane amava, oyise, afundise, kwaye afumane inkululeko yemicimbi ekugqityweni kohambo lokuzivelela kwezinto.
Kwabo baqhelene nentsingiselo yeempawu zodiac, kuya kuba luncedo ekuqondeni amanqanaba okanye amanqanaba akhankanyiweyo, ukwazi ukuba ezi zisixhenxe zingasetyenziswa njani kwaye ziqondwe yi-zodiac, kwaye nokwazi ukuba loluphi uphawu lweempawu isigqubuthelo se-Isis siyasebenza. In Umfanekiso we7I-zodiac ibonakalisiwe kunye neempawu zayo ezilishumi elinambini ngokulandelelana kwazo. Isigqubuthelo se-Isis siqala kumqondiso we-gemini (♊︎) kwihlabathi elingenazimbonakalo kwaye sandise ezantsi sisuka kwindawo yaso engabonakaliyo ngomqondiso wokuqala wehlabathi elibonisiweyo, umhlaza (♋︎), ukuphefumla, owokuqala ukubonakaliswa kwihlabathi lokomoya, Izinto zokomoya zophawu lwe-leo, (♌︎), ubomi. Iba ngumxhuzulane kwaye inzima ekuveleni kwayo kwihlabathi le-astral, emelwe luphawu lwe-virgo (♍︎), ifom, ekugqibeleni ifikelela kwinqanaba layo eliphantsi kwimpawu ye-libra (♎︎), isondo. Ke ijika inyukele phezulu kwi-arc yayo yendaleko, ehambelana nejika layo elisezantsi, ngokusebenzisa uphawu lwe-scorpio (♏︎), umnqweno; sagittary (♐︎), ingcinga; i-capricorn (♑︎), ubuntu obuthile; kukho ukuphela kwayo yonke inzame kunye noxanduva lomntu ngamnye. Ukudlula kwakhona kokungazivezi kuphela kwinqanaba elifanayo, kodwa kwelinye icala lesiphelo sendiza eyaqala kuyo uphawu lwe-aquarius (♒︎), umphefumlo.
Isigqubuthelo se-Isis sigqobhozwe ngaphezulu nangokomoya kunye nehlabathi eliphantsi nelithobayo. Iqala kumqondiso we-gemini (♊︎), isixhobo, into engenakuqala yento, apho ibambeke ngokukhuselekileyo, kwaye igqithela ezantsi kwindawo yayo. I-Isis kwindiza yakhe ephezulu akukho mntu uzibonayo, njengoko amehlo ofayo angaze abhoboze indawo engaphezulu kwembonakalo; kodwa xa umphefumlo udlule kuwo onke amabakala asixhenxe, emva koko, kumbono we-aquarius (♒︎), umphefumlo, uqonda ukuba u-Isis unje kwi-gemini (♊︎), emile, emsulwa, emsulwa.
Ubume bamanqanaba asixhenxe abonisiwe yimiqondiso. Umhlaza (♋︎), ukuphefumla, lelinqanaba okanye inqanaba apho yonke imiphefumlo ithatha inxaxheba kuyo okanye enento yokwenza nehlabathi lendawo aqala kuyo; lihlabathi elingaxelwanga ngenkohliso okanye ukungacoceki, inqanaba lokungabi natyala. Apho umlo ukwimo yalo yokomoya kunye nothixo-unjalo, usebenze ngokuhambelana nomthetho wendalo iphela uphefumlela ngaphandle kwaye ubeka ngokwawo into yomoya, ubomi, kwinqanaba elilandelayo okanye isidanga, i-leo (♌︎), kwaye ngokufanayo ukudlula. kwisigqubuthelo, umoya-uzakhela ngokwawo.
Ubomi njengezinto zokomoya, zikwinqanaba lokuqala lesondo. Iibheyibheli kwinqanaba lokuqala lobomi zizibini ezabelana ngesondo. Kolu phawu lulandelayo, i-virgo (♍︎), ifom, bangena kwinqanaba lokukhetha, kwaye imizimba ebedibeneyo ngoku yahlukile kwisini sabo. Kweli nqanaba isimo somzimba somntu sithathwe, kunye nengqondo yomzimba. Ke kuqala inqanaba okanye inqanaba lokubethelelwa emnqamlezweni, apho idyasi idlula kulo lonke usizi abathembekileyo balo lonke inkolo kuthiwa bayinyamezele. Olu luphawu lokulingana kunye nokuzinza apho lufunda khona zonke izifundo zobomi bomzimba: umzimba wokwabelana ngesondo lufunda zonke izifundo ezinokufundiswa sisini. Ngalo lonke ufundiso olufundekayo ifunda ngokusebenza kwayo yonke imisebenzi yosapho kwaye ngeli xesha isemzimbeni wokwabelana ngesondo, idlule kuwo onke amanye amabanga. Imizimba yenyama kuphela yobuntu ekule nqanaba, kodwa ubuntu njengohlanga kukulo luphawu lulandelayo, iscorpio (♏︎), umnqweno, kunye nenqanaba lokuhambisa. Kolu phawu i-ego kufuneka idlulisele iminqweno ukusuka kubudlelwane obuphathelele kwezesondo (♎︎), kwiinjongo eziphezulu zobomi. Lo ngumqondiso kunye nenqanaba apho zonke iinkanuko kunye neenkanuko kufuneka zigqithiselwe khona, ngaphambi kokuba zibonise kwipropathi yayo iifom zangaphakathi kunye namandla emi ngaphakathi nangasemva kokubonakala komzimba.
Inqanaba elilandelayo kukuba apho iminqweno-iifom ihlanjululwa. Oku kwenziwa ngcinga, (♐︎). Ke imijikelezo kunye namandla obomi ayaqondwa kwaye akhokelwa yingcinga, ngokunqwenela ukuya kwinqanaba lokugqibela lomntu, apho umntu angonakali. Inqanaba lokugqibela nelesixhenxe lelo lokugqibeleleyo, kwisibonakaliso sentloko (♑︎), ubunye; othe kuwo woyisa yonke inkanuko, umsindo, ubutshinga, oomona, obo buqhetseba, ezihlambulule, wahlambulula iingqondo zonke ezintsonkothileyo, esazi ukuba thixo ungaphakathi, umntu ofayo wambatha ukungafi, ngamasiko afanelekileyo. Lonke usetyenziso kunye neenjongo zesikhuselo se-Isis emva koko ziyaqondwa ngokucacileyo, kwaye izinto ezingafiyo kubo bonke abo basazabalaza kukungazi kwabo kwimigca esezantsi yomkhusane.
Jonga Ilizwi, Umq. 2, No. 2, "Isini."